Maamulka gobolka Togdheer oo xaalad deg deg ah kusoo rogay magaalada Burco (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka gobolka Togdheer oo xaalad deg deg ah kusoo rogay magaalada Burco (DHAGEYSO)
Maamulka gobolka Togdheer ayaa xaalad deg-deg ah kusoo rogay magaalada Burco, kadib kullan ay maanta magaaladaasi ku wada yeesheen waxgaradka iyo bulshada qeybahooda kala duwan.
Kullankaasi ayaa laga soo saaray illaa 9 qodob oo xaalad deg-deg ah, kaas oo looga hortagaayo cudurka shuban biyoodka oo si xowli ah ugu sii faafayo deegaanada ku yaalla gobolka Togdheer iyo sidii bulshada ay iskaga kaashan lahaayeen caawinta dadka uu cudurkaas soo ritay.
Sidoo kale, maamulka gobolka Togdheer iyo kan magaalada Burco ayaa dhamaan fasaxay goobihii waxbarashada sida dugsiyada quraanka iyo kan maadiga ahba, waxaana la shaaciyay in cid walba oo soo galeeysa ama ka baxaysa gobolkaasi iyo magaaladaba la buufin doonno islamarkana baaritaan caafimaad lagu sameeyn doonno.
Guddoomiyaha magaalada Burco Maxamed Yuusuf Muraad ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadii la isku raacay oo ka koobnaa sagaal qodob, waxayna qodobadaasi kala yihiin:-
1- Wixii saacadaan ka bilawdo in magaalada Burco ee gobolka Togdheer la geliyay xaalad deg deg oo caafimaad ah.
2- In la labo-laabo wacyi-gelinta ay iska kaashanayaan dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka.
3- In xildhibaanada afarta waaxood ee la siiyay gaadiidka iyo shidaalka u gaarka ah, inay habeen iyo maalin u shaqeeyaan sida ambalaasyadda oo kale.
4- In la sameeyo dar-dar gelin nadaafeed oo kheyrul caadi ah.
5- In dib loo dhigo imtixaanaadkii iskuulaadka illaa iyo amar dambe.
6- In la fasaxay dhamaan dugsiyadda quraanka iyo iskuuladda madaxa banaan ee maadiga ah.
7- In wixii haatan ka dambeeya aanay jiri doonin farmashi oo dad xanuunsanaya la dhiga.
8- In TV-da iyo idaacadaha ay waqtiyadooda qeyb ka siiyaan wacyi-gelinta cudurka shuban biyoodka.
9- In daawooyinka loo qaato cudurkaasi ee lagu iibiyo goobaha ganacsiga ay wasaaradda caafimaadka la socon doonto.
Magaalada Burco ayaa la sheegayaa in muddooyinkii ugu dambeysay ay kusoo bateen xanuunka shuban biyoodka ah, kaas oo si xowli ah ugu sii faafayo deegaanada kale ee ku yaalla gobolka gobolka Togdheer, waxaana cudurkaasi illaa iyo haatan la xaqiijiyay inay u geeriyootay ku dhawaad 30 qof, halka in ka badan 1200 qof uu xanuunkaasi haatan soo ritay.